Volan’ny teny malagasy: tsy ny fandikan-teny no mahamaika | NewsMada
Volan’ny teny malagasy: tsy ny fandikan-teny no mahamaika
Par Taratra sur 04/06/2020
Mbola tsy mety afaka hatramin’izao ny takaitra napetraky ny « fanagasiana » kisarintsariny. Mbola tsy hita mazava ihany koa ilay lalana mizotra ho any amin’ny fanarenana ny lesoka… Toa vao mainka aza vahaolana tsy izy ny irosoana…
Nanomboka tany amin’ny nanaovana ny « fanagasiana » no nahatsapana fa diso tanteraka ny lalana nizoran’ny fampianarana teto Madagasikara. Nihazakazahana fatratra sy tafahoatra loatra aza, angamba, ny fandikan-teny fa tsy ampy voambolana, hono, ny teny malagasy. Fomba fijery namoa-doza satria niteraka zava-dratsy marobe. Iray amin’ireny, rehefa tsy nikaroka sy tsy nirona intsony tany amin’ny fandikan-teny ny mpikaroka satria nahatsiaro ho diso lalana, nipoitra sy nahazo vahana tsikelikely ny fampianarana amin’ny fiteny vahiny. Lasa fady ny mianatra amin’ny fiteny malagasy. Nohabokaina ho ambany ny sekoly mampiasa ny fiteny malagasy. Niharan’izany fanivaivana izany koa ny mpianatra manovo fahalalana any amin’ireny sekoly mampiasa ny tenindrazana ireny, sns.
Raha eo amin’ny tontolon’ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara, tsy ny fandikan-teny no mahamaika. Ny famerenana ny teny hoenti-mampianatra amin’ny fiteny malagasy (tenindrazana) io no mila hafainganina. Tsy zava-tsarotra io na handaniam-bolabe ka tsy ho vita raha tsy misy famatsiam-bola avy any ivelany. Diso izany! Fa maninona ny mpianatra any Frantsa no ampianarina amin’ny fiteny frantsay? Fa maninona ny mpianatra any Alemaina no ampianarina amin’ny fiteny alemà? Fa nahoana ny zaza malagasy no ampianarina amin’ny tsy fitenin’ny razany?
Hitsikitsika tsy mandihidihy foana fa ao raha
« Tsy misy firenena handroso amin’ny fampiasana ny tenin’ny hafa », hoy ny fanambaran’ny sampandraharahan’ny Firenena mikambana misahana ny fanabeazana sy ny kolontsaina (Unesco). Raha ampianarina amin’ny fiteny malagasy ny taranaka malagasy, manjary mahay ka tsy ho azo ambakaina intsony. Tsy azo badoina intsony. Tsy azo ampirisihina hankahala ny momba azy (teninny, taniny, fomba amam-panaony…) intsony, sns. « Avy amin’ny fampitam-pahalalana sy ny fanabeazana amin’ny fitenin-drazana no anisan’ny hitsimohan’ny fitiavan-tanindrazana eo amin’ny olona iray… », hoy hatrany ny Unesco. Io tranga io no tsy tian’ny mpanjanaka hipoitra ka mahatonga azy ireo hiditra amin’ny « fanjanahan-tsaina amin’ny endriny vaovao »!
Na taranja inona, na taranja inona, ianaran’ny zaza malagasy, mila atao amin’ny fiteny malagasy ny fampianarana izany. Izany hoe, amin’ny fiteny malagasy madiorano no hanazavana azy fa tsy amin’ny fitenin’ny hafa. Azo atao tsara izany. Izay mpampianatra mihambo ho tsy mahay izany (tsy mahay manazava zavatra amin’ny fiteny malagasy), tsy tokony hanabe ny zaza malagasy.
… Ny fanazavana no mila atao amin’ny fiteny malagasy (fitenin-drazana) fa tsy ny fandikan-teny velively no mahamaika. Mila sy mitaky fanovana goavana manaraka izany ihany koa ny votoatim-pampianarana iray manontolo eto Madagasikara.Tsy midika akory izany fa hamaivanina ny fianarana ny fiteny vahiny. Tsia! Omena lanja tokoa ny teny vahiny amin’ny maha taranjam-pianarana azy. Tahaka ny taranja rehetra ihany.